တရုတ် MDF / HDF ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Roc
ROCPLEX အလယ်အလတ်သိပ်သည်းဆ Fiberboard (MDF) သည်အသုံးပြုမှုများစွာတွင်အစိုင်အခဲသစ်သားထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။
ROCPLEX အလယ်အလတ်သိပ်သည်းဆ Fiberboard (MDF) သည်အသုံးပြုမှုများစွာတွင်အစိုင်အခဲသစ်သားထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အဆင့်မြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ သစ်သားအမျှင်များနှင့်ဗဓေလသစ်များမှပြုလုပ်ထားသည့် MDF ဟုလူသိများသောအလယ်အလတ် Density Fiberboard သည်စက်ခြောက်ပြီးဖိအားများသောကြောင့်တည်ငြိမ်သောစာရွက်များကိုထုတ်လုပ်သည်။
ROCPLEX MDF (Medium Density Fiberboard) သည်အစိုင်အခဲသစ်သားများထက် ပို၍ တည်ငြိမ်ပြီးစိုထိုင်းဆနှင့်အပူသည်အပြောင်းအလဲများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ အစိုင်အခဲသစ်သားပျဉ်ပြားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စိုထိုင်းဆနှင့်အပူချိန်ပြောင်းလဲသွားသောအခါအလျားလိုက်ရောဒေါင်လိုက်ပါချဲ့ထွင်ပြီးကျုံ့သွားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သစ်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဗီရိုများ၊ တံခါးများနှင့်အကာအရံများသည်အဆင့်မြင့်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သည်။
မည်သည့်တောင်းဆိုမှုနှင့်မဆိုလျှောက်လွှာတင်ရန်အတွက် MDF (Medium Density Fiberboard) ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ROCPLEX MDF အသေးစိတ်
မျက်နှာ / နောက်ကျော: Raw MDF Melamine MDF Veneer MDF HPL MDF
အဆင့် - AA တန်း
အရောင် - ကုန်ကြမ်း MDF အရောင်၊ အစိုင်အခဲအရောင်များ၊ သစ်သားစေ့အရောင်များ၊ ဖန်စီအရောင်များ၊
ကော်: E0 ကော်၊ E1 ကော်၊ E2 ကော်၊ WBP ကော်၊ MR ကော်
အထူ - ၁-၂၈ မီလီမီတာ (ပုံမှန် ၃ မီလီမီတာ၊ ၆ မီလီမီတာ၊ ၉ မီလီမီတာ၊ ၁၂ မီလီမီတာ၊ ၁၅ မီလီမီတာ၊ ၁၈ မီလီမီတာ၊ ၂၁ မီလီမီတာ)
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ - 1220mmX2440mm, 1250mmX2500mm, 915mmX1830mm, 610mmX2440mm, 610mmX2500mm
အစိုဓာတ်ပါဝင်မှု - ၈% အောက်
သိပ်သည်းဆ: 660/700 / 720/740/840 / 1200 ကီလိုဂရမ် / m3
ROCPLEX MDF ၏အားသာချက်
ROCPLEX MDF ပျဉ်ပြားများအားသာချက်များ -
၁။ မြင့်မားသောခွန်အား၊ မာကျောမှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်မလွယ်ကူသောပုံပျက်မှု။
ထုတ်ကုန်၏သဘာဝကျမှု၊ ဖော်ရွေသောပတ် ၀ န်းကျင်ကာကွယ်မှုနှင့်နိမ့်သော formaldehyde ထုတ်လွှတ်မှု။
4. ) ယူနီဖောင်းဖွဲ့စည်းမှုနှင့်သိပ်သည်းဆ။
5. ) မြင့်မားသော acoustic နှင့်အပူ insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများ။
ကွဲပြားခြားနားသော decors လျှောက်ထားရန်ဖြစ်နိုင်ခြေ 6. ) ။
ROCPLEX MDF ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်တင်ခြင်း
ROCPLEX MDF ပျဉ်ပြားများသည်ကြိတ်ခွဲစက်များတွင်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့တွင်တူညီသောစက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
ROCPLEX MDF ပြားများသည်ခွန်အားမြင့်မားပြီးသူတို့၏ပုံသဏ္wellာန်ကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးလုံခြုံစွာသိုလှောင်ထားသည့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ။
မျက်နှာပြင်ကပိုပြားတယ် MDF သည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောဆေးသုတ်ခြင်း၊
ROCPLEX ကုန်ကြမ်း MDF ပျဉ်ပြားများသည်မှိုနှင့်အဏုဇီဝသက်ရှိအမျိုးမျိုးကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီး၎င်းသည် MDF မှထုတ်ကုန်များကိုအိမ်တွင်လုံခြုံမှုရှိစေရန်ပြုလုပ်သည်။
ROCPLEX MDF လျှောက်လွှာ
ပရိဘောဂများထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အလှဆင်ခြင်း၊ ကောင်တာ၊ ရုံးသုံးစားပွဲ။
■ထွင်းထုခြင်း၊ မျက်နှာပြင်၊ မျက်နှာကျက်၊ အခန်းကန့် (နံရံ၊ ဘုတ်) စသည်တို့။
ROCPLEX MDF ဆောက်လုပ်ရေးခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
ဤအတောအတွင်းငါတို့သည်သင်တို့ကိုလည်းထုပ်ပိုးအထပ်သား, LVL အထပ်သား, etc နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် Senso ကို ၁၈ မီလီမီတာတွင်စီးပွားဖြစ်အထပ်သားများထုတ်လုပ်ခြင်းတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သည်။
တရုတ် MDF ထုတ်ကုန်များနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်အချက်အလက်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်းအဖွဲ့သို့ဆက်သွယ်ပါ။
ရှေ့သို့ LVL / LVB
နောက်တစ်ခု: Melamine ဘုတ်အဖွဲ့